Ammonium ဖော့စဖိတ် crystal ဟာတိုးတက်ကြီးပွားဖို့ကိုဘယ်လို
Monoammonium ဖော့စဖိတ်ဓာတုတစ်ခုဖြစ်သည်ကြောင့်လျင်မြန်စွာ crystals တစ်ဦးအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်ဘို့ဘေးကင်းလုံခြုံခြင်းနှင့်လက်တွေ့ကျကျ foolproof ကြောင့်စီးပွားဖြစ်ကြည်လင်ကြီးထွားလာပစ္စည်းများအတွက်ပါဝင်သည်။ စင်ကြယ်သောဓာတုရှင်းရှင်းလင်းလင်း crystals ဖြစ်ထွန်းပေမယ့်သင်အလိုရှိကြသည်တွင်မဆို color ကိုရဖို့အစားအစာအရောင်ထည့်နိုင်သည်။ အဆိုပါကျောက်သလင်းပုံသဏ္ဍာန်အစိမ်းရောင် "မြ" crystals များအတွက်စုံလင်သည်။
အချိန်လိုအပ်ပါသည်: 1 နေ့က
ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ကွန်တိန်နာထဲမှာအရမ်းပူရေ 1/2 ခွက်ကိုသို့ monoammonium ဖော့စဖိတ်၏ခြောက်လဇွန်းမွှေပေးပါ။ ငါလျှပ်စစ်ယိုကော်ဖီထုတ်လုပ်တဲ့နှင့် (ငါအဖျော်ယမကာအဘို့အပြန်မသုံးမီကိုလျှော်သော) တစ်ဦးအရက်သောက်ဖန်ထံမှအပူရေကိုအသုံးပြုပါ။
တစ်ရက်အတွင်းမှာပဲသင်ဖန်သို့မဟုတ်အခြားအနည်းငယ်ကြီးမားတစ်ခုတည်း crystals ၏အောက်ဆုံး blanketing ရှည်ရှည်ပိန် crystals တစ်အိပ်ရာရှိပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျအဖြေအေးမှာနှုန်းအပေါ်မူတည်ရ crystals ၏ဘယ်အမျိုးအစား။ ကြီးမားသောတစ်ခုတည်း crystals များအတွက်အလွန်ပူပြင်းချမှဖြည်းဖြည်းချင်းအဖြေအအေးဖို့ကြိုးစား အခန်းအပူချိန် ။
သငျသညျ crystals တစ်ဦးအစုလိုက်အပြုံလိုက် get နှင့်တစ်ကြီးမားသောကျောက်သလင်းလိုခငျြလြှငျသငျသေးငယ်တဲ့တစ်ခုတည်းသောကြည်လင် ယူ. ကြီးထွားလာဖြေရှင်းချက်ထဲမှာနေရာ (အသစ်ဖြေရှင်းချက်သို့မဟုတ် crystals ၏ရှင်းလင်းခဲ့ပြီးသောအသက်ကြီးဖြေရှင်းချက်ဖြစ်စေ) နှင့်ဒီ 'ကိုသုံးနိုင်သည် အမျိုးအနွယ်ကိုကြည်လင် မှ' ' ကြီးမားတဲ့တစ်ခုတည်းကြည်လင်မပေါက်ပါဘူး။
သင့်ရဲ့အမှုန့်လုံးဝပျော်မပါဘူးဆိုရင်, ကသင့်ရဲ့ရေဖြစ်ကောင်းပိုပူလာအောင်လုပ်နေတယ်ပါပြီသငျ့သညျကိုဆိုလိုသည်။ ဤ crystals နှင့်အတူ undissolved ပစ္စည်းရှိသည်ဖို့ကမ္ဘာ၏အဆုံးကိုမဖွင့်ပေမယ့်သင်စိုးရိမ်လျှင်တစ်မိုက်ခရိုဝေ့ထဲမှာဒါမှမဟုတ်မီးဖိုပေါ်မှဖြေရှင်းချက်အပူကြောင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွင့်သည်တိုင်အောင်, ရံဖန်ရံခါနှိုးဆော်။
Monoammonium ဖော့စဖိတ်, နယူးဟမ်းရှား4• H ကို2PO 4, quadratic PRISM အတွက် crystallizes ။ အဆိုပါဓာတုတိရိစ္ဆာန်, စက်ရုံဓာတ်မြေသြဇာများတွင်အသုံးပြုသည်နှင့်အချို့သောအခြောက်အဓါတုဗေဒမီးသတ်ဘူးတွေ့ရပါသည်။
ဤသည်ဓာတုယားယံခြင်းနှင့်ယားယံခြင်းဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ သင်သည်သင်၏အသားအရေပေါ်မှာဖိတ်ထားလျှင်, ရေကိုအတူကချွတ်ဆေးကြောပါ။ အဆိုပါအမှုန့်ဓာတ်များကိုချောင်းဆိုးခြင်းနှင့်လည်ချောင်းနာဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်။ Monoammomium ဖော့စဖိတ်အဆိပ်အတောက်မဖြစ်ပေမယ့်အတိအကျစားသုံးဆီမဟုတ်ပါဘူး။
အဆိုပါအမှောင်မှင်အတွက် Glow Make လုပ်နည်း
တစ်ဦးပွဲစဉ်ဒုံးပျံ Make လုပ်နည်း
Breaking မကောင်းပါအပြာရောင် Crystal meth ရော့ခ် Candy ကြော်
ပူဖောင်းပုံနှိပ်ပါရုပ်ပုံများ Make လုပ်နည်း
Poinsettia သော pH စက္ကူ
အရောအနှောများနှင့်သံနှင့်ဆာလ်ဖာနေတဲ့ခြံဝင်း Make ရန်ကဘယ်လို
တစ်ခုစားသုံးနိုင်သောရေ Bottle သ Make လုပ်နည်း
သြဂတ်အမျိုးသားဂေါက်ကလပ်မှာ Hole Yardages နှင့်ပိုဒျ
အဆိုပါတစ်ကမ္ဘာလုံးဖလား Format ကိုဆိုတာဘာလဲ
ပုံစကိတ်စီးခြင်းကုန်ကျစရိတ်များနှင့်လေ့ကျင့်ရေး: စကိတ်စီးခြင်းအဆင့်အားဖြင့် Down Broken
အက်ဆစ်, ခြေစွပ်များ Bronsted လောရီသီအိုရီ
Souleymane Kant ၏ N'ko ဘာသာစကားများ
ကနေဒါ T4 အခွန်ချော်
2010 ၏ထိပ်တန်း 40 ခရစ်ယာန်သီချင်းများ
ဘယ်လိုသင်က Intensive လက်တင် Pronoun '' Ipse '' ( 'ကိုယ်ပိုင်') ကိုသုံးပါသလား?
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်: သင်္ဘော USS Enterprise ကို (CV-6) နှင့်ပုလဲဆိပ်ကမ်းများတွင်၎င်း၏အခန်းက္ပ
ဂျာမန်ခုနှစ်တွင် "ကျွန်မစိတ်မကောင်းပါဘူးတယ်" ဟုပြောပါဖို့ကိုဘယ်လို
ထိပ်တန်း 10 ကမ္ဘာ့ဖလား Songs ရဲ့ 2010
Ley က de အရီဇိုးနား SB1070 restrictiva de la inmigración
Chalchiuhtlicue - Aztec ရအေိုငျမြား၏နတ်ဘုရားမ, Streams နှင့်သမုဒ္ဒရာ
သင့်ရဲ့ကောလိပ် Crush သို့ပြန်သွားရန်ကိုသင် Likes လျှင်ပြောပြပါ5နည်းလမ်းများ